Ihe 11 I Kwesịrị Ịma Banyere Resveratrol AASraw
/blog/gallery/Ihe 11 I Kwesịrị Ịma Banyere Resveratrol
Ihe na 04 / 14 / 2022 by Mmmmmmmmmmmm dere na gallery.
1. Gịnị bụ resveratrol ntụ ntụ?
2. Gịnị bụ isi iyi nke resveratrol ntụ ntụ?
3. Kedu ka resveratrol ntụ ntụ si arụ ọrụ?
4. Gịnị bụ uru nke na-ewere resveratrol ntụ ntụ?
5. Kedu ihe mmetụta nke resveratrol ntụ ntụ?
6. Kedu ka esi ewere resveratrol ntụ ntụ na nchekwa?
7. Kedu ka esi ahọrọ ihe kacha mma resveratrol ntụ ntụ?
8. Ngwa ntụ ntụ Resveratrol
9. Resveratrol Powder Mmekọrịta
10. Nyocha na Resveratrol ntụ ntụ
Resveratrol bụ polyphenol nke a na-ahụkarị na mkpụrụ vaịn, ọkachasị akpụkpọ mkpụrụ vaịn. Nke a polyphenol bụ usoro nchebe nke mkpụrụ osisi vine megide nje na-efe efe ma na-ahapụ ya naanị mgbe osisi ahụ nọ n'ihe ize ndụ. A na-ewepụta ogige a wee ree ya ka nke ọ bụla ntụ ntụ resveratrol ma ọ bụ resveratrol ntụ ntụ ntụ ntụ. Resveratrol wepụ ntụ ntụ na-ewu ewu n'ọtụtụ ebe ma na-eri ya karịsịa n'ihi njirimara antioxidant nke polyphenol, yana ọtụtụ uru ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ resveratrol ntụ ntụ?
Resveratrol ma ọ bụ 3,4′,5-trihydroxystilbene bụ stilbenoid na phytoalexin compound nke osisi na-ewepụta mgbe a na-awakpo ma ọ bụ merụọ ahụ. Ngwakọta polyphenol nwere ihe antioxidant dị elu, bụ nke a mụọla nke ọma kemgbe nchọpụta mbụ nke resveratrol na mmanya, na njedebe 1900s. Resveratrol ntụ ntụ bụ isi ihe mgbakwunye nke na-ekwe nkwa uru ahụike n'ihi njirimara antioxidant nke ogige ahụ. Resveratrol ntụ ntụ dị ọcha na-eme ihe kachasị mma maka ihe mgbakwunye ndị a dị ka enweghị ihe ndị na-emerụ emerụ na ngwakọta ntụ ntụ na-eme ka ike na arụmọrụ nke ogige ahụ dịkwuo elu.
Achọpụtara Resveratrol na mmanya nke mbụ, ma ọ bụ nchọpụta a nyere azịza ole na ole kwere omume na Paradox French. Nri ndị France na-adabere na abụba juru eju na abụba na-adịghị mma nke a na-ejikọtakarị na mmụba nke ọrịa obi obi na ọnụ ọgụgụ mmadụ.
Agbanyeghị, ọnọdụ CHD na ndị France adabaghị na nri nke ọtụtụ n'ime ndị ahụ na-esote, nke butere mmalite okwu a, 'French Paradox'. Dị ka a maara ndị France dị ka otu n'ime ndị na-aṅụ mmanya na-acha uhie uhie n'ụwa nile, ndị ọkà mmụta sayensị chere na ọ bụ ihe dị n'ime mmanya ahụ kpatara ihe mgbagwoju anya a na ha nwere ike ịbụ eziokwu. Resveratrol na mmanya na-acha ọbara ọbara nwere antioxidants na ihe ndị ọzọ na-akpata cardioprotective nke etinyere iji chebe ndị France megide CHD n'agbanyeghị nri ha nwere abụba.
Kemgbe achọpụtara ya, e wepụtala ogige ahụ ndị na-emepụta ntụ ntụ resveratrol maka njikọ nke resveratrol wepụ ntụ ntụ nke a na-eji eme ihe maka mmepụta ihe mgbakwunye. N'otu oge ahụ, ebidola ọtụtụ nyocha dị iche iche iji mụọ uru nke resveratrol ntụ ntụ iji nye ihe akaebe doro anya nke uru nke ogige ahụ.
Kedu ihe bụ isi iyi resveratrol ntụ ntụ?
A na-ahụkarị Resveratrol na osisi dịka ọ bụ usoro nchekwa ha bụ isi. Ọtụtụ n'ime mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi ndị mmadụ na-eri mgbe niile bara ụba na resveratrol, ọkachasị akpụkpọ mkpụrụ vaịn. Nke a bụ otú mmanya si enweta nnukwu resveratrol dị elu, nke a kpọtụrụ aha na tebụl dị n'okpuru ebe a, yana ụdị mmanya dị iche iche.
Aṅụ Resveratrol (mg / 100 ml)
Mmanya uhie 0.27 0 - 2.78
mmanya rosé 0.12 5.00 × 10-03 - 0.29
White wine 0.04 0.00 - 0.17
Mmanya na-aba n'anya 0.009 8.00×10−03 — 1.00×10−02
Ihe ọṅụṅụ mkpụrụ vaịn green 0.00508 0.00 - 1.00 × 10-02
Ewezuga ịṅụ mmanya, mmadụ nwekwara ike ịnata resveratrol site na nri ụfọdụ, nke a kpọtụrụ aha na tebụl n'okpuru. A na-ahụ ọdịnaya kachasị elu nke resveratrol kwa iko nke nri ndị a na mkpụrụ vaịn na-acha uhie uhie na mulberry, oriri nke abụọ a na-atụ aro nke ukwuu n'ihi nnukwu ọdịnaya antioxidant ha. Resveratrol, na polyphenols ndị ọzọ, nwere ike ị nweta maka uru ndị a nke mkpụrụ vaịn na mulberry.
Food -eje ozi Mkpokọta resveratrol (mg)
Ahụekere ( raw) 1 iko (146 grams) 0.01 - 0.26
Ahụekere 1 iko (258 grams) 0.04 - 0.13
grepu uhie 1 iko (160 grams) 0.24 - 1.25
Koko ntụ ntụ 1 iko (200 grams) 0.28 - 0.46
Mulberry akpụkpọ 1 gram Ruo 50
Otú ọ dị, ọ dị mma ịmara na tebụl ndị dị n'elu na-ezo aka na isi nri nke resveratrol. Uzuzu resveratrol dị ọcha na ọtụtụ ihe mgbakwunye resveratrol ntụ ntụ nwere resveratrol nke sitere na osisi Eshia, ya bụ, Polygonum cuspidatum ma ọ bụ Japanese knotweed, ma ọ bụ Asia knotweed. Ndị na-eweta ntụ ntụ Resveratrol na-ebupụta ihe ahụ site na osisi knotweed ma ọ bụ jiri mulberry na skins grape mee ihe mgbakwunye ndị a.
Kedu ka resveratrol ntụ ntụ si arụ ọrụ?
Ndị na-eme nchọpụta n'ụwa niile ka na-amụ Resveratrol ka ha nweta nghọta ka mma maka usoro a na-eme ihe nke ogige ahụ, n'ime ahụ mmadụ. Iberibe nyocha ndị a na-elekwasị anya na ụdị anụmanụ, ọmụmụ in-vitro, na ọmụmụ ụlọ ọgwụ na isi nkwenye bụ na mgbakwunye resveratrol nwere mmetụta kpọmkwem na akpụkpọ ahụ.
Dabere na uru amara nke ogige ahụ, ọ dịịrị ndị na-eme nchọpụta mfe ileba anya kpọmkwem n'ime ndị na-anabata ihe ebumpụta ụwa nke na-abụkarị ọrụ maka imepụta uru ndị a.
Mgbe ibelata ihe mgbaru ọsọ nwere ike ime, ndị nchọpụta achọpụtala na resveratrol na-emekọ ihe na NQO2, AKT1, GSTP1, estrogen receptor beta, CBR1, na integrin αVβ. Ọ bụ ezie na a naghị ama kpọmkwem mmetụta nke mmekọrịta dị n'etiti ndị na-anabata ndị a na resveratrol, ọ nwere ike biputere na uru ndị a maara na-abụkarị n'ihi mmekọrịta ndị a. Otú ọ dị, ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma ịjụ ohere nke uru ndị a maara bụ site na usoro ọrụ ndị ọzọ. Naanị nyocha ọzọ nwere ike ikpebi nke ọma.
Kedu uru ọ dị n'iji resveratrol ntụ ntụ?
Enwere uru dị iche iche nke na-ewere resveratrol ntụ ntụ, sitere na ahụike obi ka mma ruo ogologo ndụ ndụ. A mụọla uru ndị a nke ọma na ụdị anụmanụ ma a na-amụ ụfọdụ n'ime ha ugbu a na ọmụmụ ụlọ ọgwụ. Uru ndị a gụnyere, mana ọnweghị oke na:
Ekwenyere na mmanya nwere ọtụtụ antioxidants na ndị a sitere na resveratrol na mmanya. Antioxidants dị mkpa iji luso ụdị oxygen na-emeghachi omume na radicals n'ime ahụ ọgụ. Nke ikpeazụ bụ ion na-adịghị akwụsi ike na-ekere òkè na mmeghachi omume kemịkal iji mepụta ion ndị ọzọ na-emerụ ahụ maka ahụ.
A mara Resveratrol iji kwalite mmepụta nke enzymes antioxidant dị ka superoxide dismutase (SOD), thioredoxin, glutathione peroxidase-1, heme oxygenase-1, na catalase. Njirimara antioxidant ndị a niile nke resveratrol enwetala na ụlọ nyocha, agbanyeghị, ọ na-esiri ndị sayensị ike igosipụta ha na vivo. Ebe ọ bụ na bioavailability nke ogige ahụ dị ntakịrị, a maghị ma ọ bụrụ na e nwere ihe zuru ezu nke ogige ahụ iji nwee ike ịmepụta mmetụta ndị a n'ime ahụ.
Ndị na-eme nchọpụta ebula ụzọ chee na ọ bụ ezie na resveratrol n'ime ọbara ezughị iji mepụta uru ha na-achọ, ọ ga-ekwe omume na metabolites nke resveratrol na-emepụta uru ndị ahụ. Otú ọ dị, n'oge na-adịghị anya, echiche a kwụsịrị site na nchọpụta na metabolites, n'agbanyeghị na ọ na-etinyekwu uche, nwere mmetụta antioxidant dị ole na ole karịa resveratrol n'onwe ya.
Estrogenic na mgbochi estrogen ọrụ
A na-eche na resveratrol nwere mmetụta estrogen dị ka nke ukwuu n'ihi na usoro kemịkalụ nke polyphenol a yiri nnọọ diethylstilbestrol, agonist estrogen synthetic. N'iburu eziokwu a, ọ ga-ekwe omume na resveratrol, otu ugboro n'ime ahụ, na-ejikọta ndị na-anabata estrogen iji mepụta mmetụta estrogen.
N'ịrụ ọrụ na nkwupụta a, ndị nchọpụta haziri nri Petri iji mụọ mmetụta resveratrol na ndị na-anabata estrogen. N'oge na-adịghị anya, a chọpụtara na resveratrol, dabere n'ihe dị iche iche, ma ọ bụ na-eme ihe dị ka agonist ma ọ bụ antagonist na estrogen receptor. Achọrọ nyocha ọzọ ka enwere nghọta ka mma nke ihe ndị na-ebute mmetụta agonist ma ọ bụ antagonist nke ogige ahụ.
A mara Resveratrol iji gbochie uto mkpụrụ ndụ kansa n'ime ahụ mmadụ, a makwaara ya na ọ na-egbochi njirimara nke ọrịa cancer, njirimara nke mkpụrụ ndụ kansa nke na-enye ha ohere ịmụba na ịgbanahụ ọnwụ nke mgbochi ọrịa.
A na-egbochi atụmatụ ndị dị ka angiogenesis na mgbochi nke pro-apoptotic ihe na-egbochi ma na-alụ ọgụ site na oriri resveratrol ntụ ntụ. Ebe ọ bụ na anabataghị mkpụrụ ndụ kansa ka ọ too ma ọ bụ zoo ka achọpụta ya, ha na-enwetakarị apoptosis ma ọ bụ igbu onwe ha. Nke a na-ebute ọnwụ nke mkpụrụ ndụ kansa niile na ya mere, mgbochi nke ọrịa cancer, karịsịa pancreatic, ara, prostate, na ọrịa cancer thyroid.
Ngwongwo cardioprotective, yana ihe ndị na-akpata antioxidant, so n'ime uru mbụ nke ogige a ga-ewepụta. Ọ bụ uru a nyere aka dozie esemokwu ndị France na ihe akaebe sayensị kwadoro kemgbe ahụ. Usoro nke resveratrol na-echebe obi bụ site na imeziwanye ọrụ endothelial.
Ngwọta endothelial bụ isi ihe na-egosi ọrịa obi na-abịanụ n'ihi na ọ nwere ike ibute mmebi neutrophil na-ezighi ezi, ọrịa coagulation, na ọbụna, nguzobe thrombosis. Ihe ndị a niile bụ ihe ize ndụ maka nnukwu ihe omume obi.
Resveratrol na-elekwasị anya n'ịkwalite ọrụ nke mkpuchi endothelial nke arịa ọbara iji mee ka ahụike nke arịa dịkwuo mma na imeziwanye nke a naanị ka egosiri na ọ ga-eme ka ahụike obi dịkwuo mma ma belata ohere nke ịmepụta ọnọdụ obi dị ka ọrịa akwara obi.
Ọgwụgwọ ọrịa shuga mellitus, ụdị 2
Nguzogide insulin ma ọ bụ mbelata mmetụta insulin, na oke ibu bụ ụfọdụ n'ime isi ihe kpatara ụdị ọrịa shuga mellitus nke 2 na ndị a bụ akụkụ abụọ nke resveratrol lekwasịrị anya. Ọ na-achọ ịkwalite profaịlụ lipid iji luso okwu oke ibu ọgụ n'etiti ndị na-eto eto, nke gosikwara na ọ bara ezigbo uru n'ịkwalite ahụike obi ha.
Ejikọtakwara ojiji resveratrol na mmetụta insulin ka mma, yabụ na-ejikwa akụkụ niile nke DM. Ihe ndị a bụ mmetụta ndị ọkà mmụta sayensị na-agbalị imegharị na ọmụmụ ihe gbasara ụlọ ọgwụ ka ha wee nwee ike ikwubi na ihe àmà sayensị doro anya na resveratrol powder supplements nwere ike ịgwọ, ọ bụghị ijikwa, ọrịa shuga mellitus.
Kedu ihe mmetụta dị na resveratrol ntụ ntụ?
Resveratrol bụ ngwakọta a na-ahụ n'onwe ya na nri a na-erikarị n'ụwa niile. Ọ gwụla ma mmadụ nwere ihe nfụkasị ahụ na nri ndị a, dị ka mkpụrụ vaịn, ahụekere, na beri, ọbụna nnukwu nri ndị a adịghị mma iri ya.
Resveratrol enweghị mmetụta ọ bụla ama ama yana enweghị nsí ọ bụla akọpụtabeghịkwa. Ejikọtaghị oriri nke ọbụna nnukwu ego nke ogige stilbenoid eke a na mmetụta ọjọọ ọ bụla, nke pụtara na enwere ike rie ya n'enweghị nsogbu.
Dị ka e kwuru n'elu, resveratrol nwere estrogenic Njirimara na ruo n'ihu nnyocha kwubiri na ọ dị mma maka ndị inyom nwere estrogen-sensitive cancer, a ga-ezere ihe mgbakwunye nwere resveratrol.
N'ime ọmụmụ ihe e mere iji chọpụta ọkwa nsi nke resveratrol ntụ ntụ, a chọpụtara na ndị ọrụ na-ewere 1000 mg / ụbọchị nke resveratrol nwere nsogbu nhụjuanya dị nro dị ka mgbu afọ, flatulence, na afọ ọsịsa. Ndị na-ewere resveratrol karịrị 2000 mg kwa ụbọchị ka akọwara afọ ọsịsa a ma ama karịa. Agbanyeghị, ọ dị mkpa iburu n'obi na a na-edozi nsogbu eriri afọ ndị a n'otu oge na ọ chọghị enyemaka ahụike.
N'otu aka ahụ, n'ihi enweghị ozi ma resveratrol nwere ike ịgafe placenta ma ọ bụ nyefee ụmụ ọhụrụ site na mmiri ara ara, a na-atụ aro ka ị zere ihe mgbakwunye ndị a n'oge ime na nwa ara. A naghị atụ aro ịṅụ mmanya na-aba n'anya n'oge ime ime ma akwadoghị ka ndị inyom dị ime nwaa ịnata resveratrol ha chọrọ kwa ụbọchị site na ịṅụ mmanya.
Kedu ka esi ewere resveratrol ntụ ntụ na nchekwa?
Usoro a na-atụ aro maka resveratrol ntụ ntụ bụ 5 mg na 25 mg, na ndị na-eme nchọpụta na-ekiri ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke resveratrol na ahụ mmadụ na otu dose nke 25 mg kwa ụbọchị. A na-anabata ihe mgbakwunye ahụ nke ọma n'ozuzu ya ma na-etinye ya nke ọma mgbe ejiri ọnụ ya. Otú ọ dị, ọ dịghị anọ n'ime ahụ dị ka resveratrol ogologo oge n'ihi metabolization ngwa ngwa na mkpochapụ nke ogige ahụ.
A na-ejikọta resveratrol maka mkpochapụ, yana glucuronic acid na sulfates, na-eme ka resveratrol glucuronides, sulfates, na / ma ọ bụ sulfoglucuronides. Resveratrol nke ejikọtara na sulfates bụ nke a na-ahụkarị na mmamịrị mmadụ na plasma bụ nke na-ewe ogologo oge iji kpochapụ.
N'ozuzu, bioavailability nke ogige ahụ dị ala na naanị 0.5%, ọ bụkwa nke a dị oke ala bioavailability mere ka ndị ọkà mmụta sayensị na-atụgharị uche ma ọ bụrụ na oriri resveratrol ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla na ahụike mmadụ.
Ma ị na-azụta resveratrol powder wholesale ma ọ bụ resveratrol ntụ ntụ nnukwu ego, ọ dị mkpa ileba anya na ebe nchekwa na ụlọ ọrụ resveratrol kpọmkwem maka onye na-ere ahịa nke a họọrọ.
Ebe nchekwa na-ezighị ezi nke na-enye ohere ikpughe oke anyanwụ ma ọ bụ na mmiri na-esi na ntụ ntụ nwere ike imerụ ntụ ntụ ma mee ka ọ bụrụ ihe na-emerụ ahụ maka oriri mmadụ ma ọ bụ mee ka ọ ghara ịba uru. Ihe nke a pụtara bụ na ọ ga-akpata mmetụta ọjọọ ma ọ bụ enweghị mmetụta na uru ọ bụla.
Dị ka ihe dị mkpa dị ka usoro mmepụta ihe, usoro nchekwa nchekwa ahụ dịkwa oke mkpa na a ga-enyocha ya nke ọma tupu ị kpebie itinye ya na resveratrol ntụ ntụ zụta n'aka onye na-ere ahịa.
Ọzọkwa, a ga-elebakwa anya na ụkpụrụ nrụpụta dị ka ụkpụrụ nchekwa nke ndị na-emepụta ntụ ntụ resveratrol ji mee ihe. Mgbakwụnye ọ bụla nke mmetọ ma ọ bụ nsi n'oge a nke a na-enyochaghị ya nwere ike ịbụ ihe kpatara mmerụ ahụ kachasị. A ga-ezere onye na-ere ahịa na-echetakarị ngwaahịa ma ọ bụrụ na ebumnuche bụ ịzụta ihe mgbakwunye resveratrol ntụ ntụ kacha mma.
Kedu ka esi ahọrọ ihe mgbakwunye resveratrol ntụ ntụ kacha mma?
Ihe mgbakwunye resveratrol ntụ ntụ kacha mma bụ ngwaahịa ejiri nlezianya na-eleba anya na ntuziaka na ụkpụrụ yana nchekwa kwesịrị ekwesị nke ngwaahịa ikpeazụ. Ọzọkwa, ọ ga-enwerịrị ọnụọgụ resveratrol achọrọ maka ọ bụla ka ndị na-azụ ahịa wee nweta uru nke mgbakwunye ahụ n'onwe ha.
Ọ kwesịrị ịbụ ntụ ntụ resveratrol dị ọcha ma ghara inwe ihe ọ bụla ọzọ jikọtara ya na nke ahụ nwere ike ibelata arụmọrụ na absorption nke mbụ. Ihe mgbakwunye ọ bụla na-adabaghị na njirisi ndị a, ọbụlagodi na obere ntakịrị, kwesịrị izere iji hụ na a na-eji ihe mgbakwunye dị mma nke na-ekwe nkwa inye uru niile nke resveratrol.
Ngwa resveratrol ntụ ntụ
A na-ejikarị ntụ ntụ Resveratrol eme ihe maka antioxidant, cardioprotective, mgbochi ọrịa cancer, na uru ọgụgụ isi.
Mmekọrịta Resveratrol ntụ ntụ
A na-achọta ntụ ntụ Resveratrol ka ọ dị mma maka oriri mmadụ na-enweghị mmetụta ọjọọ ọ bụla a na-akọ ọbụna na oriri nke nnukwu ego. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ejiri ọgwụ ole na ole ndị ọzọ ewere ya, ọ nwere ike ịkpata oke nhụjuanya na mmebi ahụ ike.
Tupu ịmalite mgbakwunye ọ bụla, a na-atụ aro ka gị na dọkịta na-ahụ maka nlekọta mbụ nwee mkparịta ụka zuru ezu banyere ọgwụ ọ bụla a na-aṅụ ma ọ bụ na-aṅụ ruo n'oge na-adịbeghị anya. Nke a na-enye onye dibia aka ịkwado nke ọma ma ọ bụrụ na achọrọ oge nchere ma ọ bụ ọ bụrụ na a ga-akwụsị ma ọgwụ ma ọ bụ ihe mgbakwunye ahụ.
Resveratrol ntụ ntụ nwere ike iji ọgwụ ole na ole emekọrịta ihe, nke a kpọtụrụ aha n'okpuru:
Otu n'ime mmetụta nke resveratrol nke achọpụtara n'oge na-adịbeghị anya bụ na polyphenol nwere ike igbochi nchịkọta platelet, nke bụ nzọụkwụ dị oké mkpa na nchịkọta ọbara. N'ihi mmetụta a, ndị mmadụ na-ewere resveratrol nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ọnya n'ụzọ dị mfe na ọbara ọgbụgba. Nke a, mgbe ejikọtara ya na mmetụta nke ọgwụ mgbochi ọbara, na-ekwubiga okwu ókè ma nwee ike ibute ọbara ọgbụgba na-eyi ndụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ihi oke ọbara na-ebelata. A naghị atụ aro ikpokọta ihe ndị a ọnụ.
Ọgwụ ndị metabolized site na CYP enzymes
Resveratrol bụ ihe na-egbochi enzyme CYP. Enzyme CYP dị mkpa maka metabolism nke ọtụtụ ọgwụ na imeju, na mgbe a na-eji resveratrol na-ewere ọgwụ ndị na-ebute metabolism nke mbụ site na imeju, a gaghị eme ya nke ọma. Kama nke ahụ, ụdị ndị na-arụ ọrụ nke ọgwụ ndị a ga-anọ n'ime usoro mmadụ, na-ekwubiga okwu ókè mmetụta ha nke na-ebutekarị mmerụ ahụ karịa nke ọma.
Nyocha na Resveratrol ntụ ntụ
Nyocha Resveratrol ntụ ntụ Reddit fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ọma na ndị ọrụ na-aṅụ iyi site na uru. Uru niile nke ngwaahịa a na-enweta site na ndị ọrụ n'ụwa niile, na-ebute ọkwa dị elu nke kpakpando 4.7 n'ime kpakpando ise maka ngwaahịa a, n'ịntanetị. Otu onye ọrụ nke nwere akụkọ ihe mere eme nke ọrịa obi hapụrụ nyocha a maka ntụ ntụ resveratrol, 'Enwere m nkụchi obi 5 ma nwee mmebi obi 3%.
Ya mere, amalitere m ọgwụgwọ resveratrol, malitere 500mg n'izu mbụ na-esote izu abụọ na-akụda dose m ruo 1000mg mgbe ọnwa mbụ gasịrị, amalitere m inwe mmetụta dị mma karịa mgbu obi (angina) na ụbọchị 60 m wụliri elu ruo 2000mg ma ọ bụ 2grams nke resveratrol. ugbu a ọ dị m mma karịa tupu MI mbụ m, ahụrụ m onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-akọwara ya atụmatụ ọgwụgwọ nke m, O nwere obi abụọ ya mere o nyere iwu echocardiogram ma nwee WOW o kwuru na m hụrụ nsonaazụ ndị a na mbụ, O kwuru na nwoke nwere 3 M.Is over. Afọ 40, mmebi obi niile pụtara na ọ ga-apụ na mmụba 10% nke ọrụ obi, Ya mere ana m aṅụ iyi site na resveratrol na onye ọ bụla n'ime anyị kwesịrị ịdị na vitamin a.'
Ndị ọrụ na-enwekarị obi ụtọ na ngwaahịa a na ọtụtụ n'ime ha bụ ndị kwere ekwe siri ike na mmetụta nke mgbakwunye ahụ, na ha ga-eji obi ụtọ kwado ya ndị enyi na ezinụlọ ha.
Resveratrol bụ stilbenoid ụdị polyphenol nke a na-ahụkarị na skins nke mkpụrụ vaịn na tomato. Ọ nwere ọtụtụ uru, karịsịa cardioprotective atụmatụ na antioxidant Njirimara, na-ahụ maka obosara ojiji nke ihe mgbakwunye resveratrol ntụ ntụ ma ọ dị mma ịmara na mmetụta ndị a niile anaghị akwado data sayensị. Resveratrol ntụ ntụ dị mma maka oriri mmadụ, na ọbụna n'ọtụtụ buru ibu, na-akpata mmetụta dị nro na nke dị nro nke eriri afọ nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na-edozi onwe ya. N'ozuzu, resveratrol bụ ihe nchekwa, polyphenol na-amịkọrọ nke ọma nke nwere obere bioavailability na ọtụtụ uru.
AASraw bụ onye nrụpụta ọkachamara nke Resveratrol ntụ ntụ nke nwere ụlọ nyocha onwe ya na nnukwu ụlọ ọrụ dị ka nkwado, a ga-arụ ọrụ niile n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mma. Usoro ọkọnọ ahụ kwụsiri ike, ma ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa na-anabata.Nabata ịmụtakwu ozi gbasara AASraw!
Hapụ Anyị Ozi